Ogaden News Agency (ONA) – Koox Faneedka Danab ee Jaaliyada Ogaadeeniya ee Kenya oo bandhigyo Cusub soo wada iyo Shir ay Nairobi ku yeelatay Kooxdu
Koox Faneedka Danab ee Jaaliyada Ogaadeeniya ee Kenya oo bandhigyo Cusub soo wada iyo Shir ay Nairobi ku yeelatay Kooxdu
Posted by ONA Admin	/ January 24, 2012
Kooxda Danab oo ah koox faneed ay leedahay Jaaliyada Ogaadeeniya ee dalka Kenya ayaa guulo la taaban karo ka gaadhay ka hortaga iyo burburinta kooxo faneed uu cadowgu dabada ka riixayey oo ay kamid yihiin dhalinyarada Waayaha Cusub oo qaar kamid ah uu cadawgu doonayey in uu ooga faa’iidaysto dhalinyarada Soomaaliweyn ee ku nool wadamada Bariga afrika faafinta beenta laga soo dhoofiyey adis abab kuna abaabulo dhalinta.
Hadaba Xaflada ay Kooxda Danab maanta sameeyeen ayey daahfur ooga dhigayaan in ay soo wadaan Riwaayado iyo bandhig faneedyo ay ka samayn doonaan magaalooyinka kale oo wadanka Kenyan ka tirsan kadib markii ay abaabul fiican ka sameeyeen Nayroobi, intii ka danbeyey Riwaayadii ay qaabteen 17-9-2011 oo ahayed Riwaayadii ugu xikmada badneed ee abib laga dhigo Nairobi-Kenya. Riwaayadaa ayaa loogu magacdaray “Kalaguurki weeyee Ogaadeeniyaay Garo”. Riwaayadaas oo Kooxda Danab ay dhigeen ayay Jaaliyada Ogaadeeniya ee Kenya ka heleen Hanbalyo iyo Bogaadin ooga timid guud ahaan dhalinyarada Ogaadeeniya ee daafaha dunida ku kala nool iyo Jaaliyadaha Ogaadeeniya iyadoo intaas ay u dheertahay tilmaamo.
Dhalinyarada Ogaadeeniya ee Ku nool wadamada Bariga Afrika ayaa iyagu dhagaha u taagaya hal abuurka iyo hindisiyaasha cusub ee ay kooxda Danab ee Xidigaha JWXO ku soo kordhinayaan barnaamij faneedka Jaaliyadaha Ogaadeeniya iyadoo ay dhamaan dhalinyaradu jecelyihiin in ay ka qayeb qaataan hawlaha ay Danab wado.
Sikastaba ha ahaatee Kooxda Danab ayaa dardar galin iyo abaabul oogu jirta sidii ay u soo saari lahaayeen Suugaan halgameed cusub oo qayeb wayn ka qaadan doonta abaabulka dhalinyarada Ogaadeeniya ee aduunka ku faafsan iyadoo ay Danab ku hamiyayaan in ay waxbadan oo is badal ah ku sameeyaan qaabkii hore ee Riwaayadaha ay u soo bandhigi jireen taasoo qayeb weyn ka qaadan doonto kor u qaadidad suugaan halgameedka, xiiso weyna galindoonta dhalinyarada Ogaadeeniya.
Gabogabadii Shirka ayey dhalintu ku balameen in ay ka midho dhalinyaan hawsh ay hayaan oo ay aaminsanyihiin in ay tahay door muhiim ah oo bulshada Ogaadeeniya ay ku dareensiinayaan dalkooda dhacan kuna barbaarinayaa caruurta iyo dhalinyaro badan oon dhulka Ogaadeeniya nasiib u yeelanin in ku barbaaraan dhibaatada guumeysiga awgeed oo ay qoxooti ku yihiin wadamo kale.